Kobo Aura One တွင်အိပ်စက်ခြင်းအဖုံးတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
Kobo Aura One တွင်အိပ်စက်ခြင်းအဖုံးများရှိပြီးဖြစ်သည်
Joaquín Garcia က | | ပစ္စည်းများ, Kobo
Kobo eReader အသစ်ကိုလာမည့်လတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး Kobo Aura One ကိုစျေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်သော eReader ဖြစ်စေမည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဒြပ်စင်သစ်များဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုမှာဖြစ်လိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သော eReader များအတွက် sleepcover.
များစွာသောလူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဒါပေမယ့်လည်း ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများရှိပါတယ် ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုဝယ်တဲ့အခါအသုံးပြုသူတိုင်းအကောင့်ထဲထည့်ရမယ်။
Kobo Aura One အိပ်စက်ခြင်းသည် eReader နှင့်ကမ်းလှမ်းသည် ဖြစ်နိုင်ခြေကို device ကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့်ကျွန်တော်အမှုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့အဖြစ်က activating ၏မသာ ဒါပေမယ့် eReader ကို lectern မှာထားခဲ့သလိုမျိုးပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်မှာဖတ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ၄ င်းလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အသုံးဝင်ပါသည် eReader သည်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းပိုသည် ထို့ကြောင့် ၈ လက်မဖန်သားပြင်နှင့် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။
ဤအိပ်စက်ခြင်းသည် Kobo Aura One ကဲ့သို့ရေနှင့်မကိုက်ညီပါ
သို့သော်၎င်းတွင်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများလည်းရှိသည်။ Kobo Aura One သည်ရေစိုခံခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိကြောင်းမမေ့ပါနှင့်၊ သို့သော်ဤအိပ်စက်ခြင်းသည်မမှန်ပါ ရေနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်အဖုံးပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ sleepcover ကိုဝယ်လိုက်ရင် Kobo Aura One ကိုရေအောက်လိုနေရာမျိုးကိုခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ eReader ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Kobo Aura HD ဟာမျှတတဲ့အားကောင်းတဲ့ eReader တစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်ဖုံးမှမလိုအပ်ပါဘူး ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် Kobo Aura One သည်၎င်းကိုကာကွယ်ရန် eReader မလိုအပ်ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုရေအထောက်အပံ့အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ eReader အဖြစ်အသုံးပြုလိုပါကအိပ်စက်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဘက်ထရီမကောင်းလျှင်၊ သော်လည်း ဤကိစ္စတွင်ဝမ်းနည်းစွာဆိုအရန်ဘက်ထရီမရှိပါ။ ထို့အပြင်အရန်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အဖုံးဖုံး Kobo Aura One သို့မဟုတ်အခြားဖတ်ရှုသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » Kobo Aura One တွင်အိပ်စက်ခြင်းအဖုံးများရှိပြီးဖြစ်သည်
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အပိုဒေါ်လာ ၅၀ အတွက်ကျွန်ုပ်မ ၀ ယ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ / ... သင် Aura One ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စီစဉ်နေပါသလား ???
Yon သစ်ပင် ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကိုရက်အနည်းငယ်လောက်စာဖတ်နေတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင် Kobo Aura HD လည်းရှိသည်။ နှစ်နှစ်ခန့်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားရန်ဤ Kobo Aura One အသစ်တွင်တိုးတက်မှုများစွာသင်တွေ့မြင်ပါသလား။
Yon Tree သို့စာပြန်ပါ
အကယ်၍ ၎င်းတွင်အပိုဘက်ထရီများရှိပါက ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Kindle Oasis သည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သောအခါအခြား Kindle နှင့်ဆင်တူသောအလေးချိန်ကိုပြန်ပေးသည်။
ဤ e-reader သည် Kindle တွင်မရှိသောကောင်းကျိုးများရှိသည်၊ ဥပမာအလင်း၏အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အပူချိန်။
၎င်းသည် Hugo Awards 2016 ကိုအနိုင်ရသူများဖြစ်သည်
New York Times သတင်းစာ app ကိုလာမည့်လတွင်အနားယူတော့မည်